Takura masero Fekitori - China Takura maseru Vagadziri, Vatengesi
Scale isina mvura
Yakapedzwa kaviri Shear Beam
Motokari chiyero sensor
Makakatanwa & Kumanikidza
Imwe Pfungwa Mutoro Sero
Dhijitari Mutoro Sero
Maindasitiri Epasi Kuyera Zviyero
Mushure mekutengesa sevhisi & Kesi
JJ Isina Mvura Bhenji chikero
JJ Yemvura Isina Tafura Scale
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPL
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPH
Column Rudzi-CTB / CTBY
Yakapetwa kaviri Shear Beam-DESB9
Yakapedzwa kaviri Shear Beam-DESB8
Yakakwira Moment / Off-Center Kurodha
Hopper & Net Kuyera
Tarisa Kuyera & Kuzadza Machines
Platform uye Belt Conveyor Zviyero
OEM uye VAR Mhinduro
–Inoxydable zvinhu, laser yakavharwa, IP68
Inoenderana nemitemo yeOIML R60 kusvika pa1000d
-Kunyanya pakushandisa vanotora marara uye nekumisikidza matangi pamadziro
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPG
C3 chaiyo kirasi
Kunze kwepakati mutoro kwakabhadharwa
Aluminium chiwanikwa kuvaka
Max. masimba kubva pa5 kusvika ku 75 kg
Inodzivirirwa yekubatanidza tambo
Chitupa cheOIML chinowanikwa pachikumbiro
Chitupa chekuyedza chinowanikwa pakukumbira
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPF
Iyo yakakwira inokwana imwechete poindi mutoro sero yakagadzirirwa kugadzirwa kwematanho epuratifomu. Rutivi rukuru ruripo rwekusimudza runogona zvakare kushandiswa mumudziyo uye hopper kuyera kunyorera uye mabhini-kusimudza kunyorera mumunda weye-bhodhi mota inorema. Yakagadzirwa kubva kualuminium uye zvakatipoteredza zvakavharwa ne potting remubatanidzwa kuona mukurumari.
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPE
Ipuratifomu inoremedza maseru ari danda rekutakura maseru ane lateral yakafanana kutungamira uye yakatarisana kukotama ziso. Kuburikidza neiyo laser welded kuvaka iyo inokodzera kushandiswa muindasitiri yemakemikari, chikafu indasitiri nemaindasitiri akafanana.
Mutoro wesero iri laser-welded uye inosangana nezvinodiwa zvekuchengetedza kirasi IP66.
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPD
Imwe poindi mutoro wesero unogadzirwa neakasarudzika chiwanikwa aluminium zvinhu, anodized kupfeka zvinoita kuti zvinyanye kumira kune zvakatipoteredza mamiriro.
Inogona kushandiswa yega mumapuratifomu chikero maficha uye ine yakakwira kuita uye yakakwira kugona.
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPC
Iyo yakanyatsokodzera kushandiswa muindasitiri yemakemikari, indasitiri yezvikafu nemaindasitiri akafanana.
Sero rinotakura rinopa mhedzisiro yakanyatsoburitswa, pamusoro penguva yakareba kunyange munzvimbo dzakaomarara dzemabhizimusi.
Iyo mutoro cellmeets zvinodikanwa zvekuchengetedza kirasi IP66.
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPB
SPB inowanikwa mumakirogiramu mashanu (10) lb kusvika ku100 kg (200 lb) shanduro.
Shandisa muzvikero zvebhenji, kuverenga zviyero, tarisa kuyera masisitimu, zvichingodaro.
Izvo zvinogadzirwa nealuminium alloy.
Imwe Pfungwa Mutoro Cell-SPA
Solution ye hopper uye bin inorema nekuda kwekukwirira kugona uye yakakura nzvimbo chikuva saizi. Iyo yekumisikidza schema yeiyo mutoro sero inobvumira yakananga kubhairira kumadziro kana chero yakakodzera yakatwasuka chimiro.
Inogona kukwirwa padivi pemudziyo, uchirangarira muhombe yekukura kweplatter. Iyo yakafara chinzvimbo chinzvimbo inoita kuti mutoro wesero ushandiswe mune dzakasiyana siyana mafekitori ekushandisa.
Dhijitari Mutoro Sero: SBA-D
–Dhijitari yekubuda chiratidzo (RS-485/4-waya)
–Nominal (yakarongwa) mitoro: 0.5t… 25t
–Laser yakasungwa, IP68
-Kuvaka overvoltage dziviriro
Dhijitari Mutoro Sero: DESB6-D
–Nominal (yakarongwa) mitoro: 10t… 40t
Dhijitari Mutoro Sero: CTD-D
–Nominal (yakarongwa) mitoro: 15t… 50t
-Self kudzorera rocker pini
-Stainless simbi zvinhu Laser welded, IP68
Icho chiri chechokwadi chakamisikidzwa chokwadi kuti reder inozogutsikana ne
iyo inoverengwa peji kana uchitarisa
Kero:No.1 jinhua mumugwagwa, zhifu dunhu
Calibration Zviyero zveDhijitari Scales, Certified Weights, Scale Kuchengetedza Kurema, Sheuri Beam Load Cell, Kuyera Kurema Set, Kuchengeta Misa,